Nemanja Vidić oo cadeeyay weeraryahannadii ugu adkaa ee uu abid kaga horyimid horyaalka Premier League – Gool FM
Manchester City oo adduun dhan €94m duldhigtay xiddig ka tirsan kooxda Inter
Shacabka reer Mogdisho oo siyaabooyin Kala duwan ugu aragti dhiibtay kulanka dhex maraya kooxaha Horseed Iyo Dekedda
Horudhac: Wax walba aad uga baahan tahay kulanka adag ee dhex mari doono kooxaha Dekedaha Iyo Horseed
Man United, Man City, Liverpool, Real Madrid, Inter Milan & Guud ahaan kulammada caawa laga ciyaarayo tartammada kala duwan
Horudhac: West Ham United vs Liverpool… (Reds oo doonaysa inay sii wadato guulaheeda xiriirka marka ay booqanayso caawa garoonka London)
Nemanja Vidić oo cadeeyay weeraryahannadii ugu adkaa ee uu abid kaga horyimid horyaalka Premier League
(England) 09 Sebt 2019. Daafaca reer Serbia ahna kabtankii hore kooxda Manchester United ee Nemanja Vidić ayaa wuxuu shaaca ka qaaday magacyada weeraryahanadii ugu adkaa uu ka hor yimid kulamadii uu ciyaaray taariikhda xirfadiisa ciyaareed kubadda cagta ee horyaalka Premier League.
Nemanja Vidić ayaa kooxda Manchester United kaga soo biiray naadiga Spartak Moscow ee dalka Russia sannadkii 2006-dii, waxayna Red Devils ku dhibtootay radinta badalkiisa, kaddib markii uu u dhaqaaqay Inter Milan sanadkii 2016-kii.
Wargeyska “Daily Mirror” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Nemanja Vidić, kaasoo uu kaga hadlay weeraryahanadii ugu adkaa uu ka hor yimid xirfadiisa kubadda cagta wuxuuna yiri:
“Khibradeyda koowaad waxay aheyd Peter Crouch, waligey maan arag weeraryahan laba mitir ah, waxaan ka fikiri jiray sidii aan ku awoodi lahaa inaan ka hor tago isaga”.
“Didier Drogba wuxuu kaloo ahaa ciyaartoy caqli badan, waxaan ka hor imid waqtihii ugu fiicnaa ee xirfadeena kubadda cagta”.
“Sergio Aguero wuu ogyahay halka kubaddu ay ka imaan doonto iyo halka uu ka weerartami karo, laakiin gudaha xerada ganaaxa ayaa leh sharciyo adag, taasina waxay ka caawineysaa isaga inuu si dhakhso leh u bedelo jihada, gaar ahaan difaacyada Ingriiska”.
Intaas kaddib daafaca reer Serbia ahna kabtankii hore kooxda Manchester United ee Nemanja Vidić ayaa wuxuu hadalkiisa ku soo xiray ka hadalka Luis Suárez wuxuuna yiri:
“Wax walba oo uu sameeyo waa argagax, u maleyn maayo inuu si fiican u yaqaano waxa uu sameynayo laakiin waa uu guuleystaa, waa ciyaaryahan toos ah ee u gaajeysan inuu goolal dhaliyo, wuxuu carraraa 90-ka daqiiqo, dab ayaana ka shidan”.
Halyeeyga reer Holland ee Frank de Boer oo dhaleeceeyay tababare Valverde sababa la xiriira Frenkie de Jong
“Neymar wuu ogyahay inuu sameeyay khaladaad, laakiin…” – Thiago Silva